Maxaad ka taqaanaa gentaalkii lagu riday diyaaraddii Malaysia? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maxaad ka taqaanaa gentaalkii lagu riday diyaaraddii Malaysia?
Mareeg.com: Khamiistii lasoo dhaafay eek u beegneyd 17-kii July 2014 waxaa hawada dalka Ukraine lagu soo riday diyaarad rayid oo rakaab ah, taasoo siday 295 ruux oo dhamaantood ku dhintay shilkaas. Diyaaradda waxaa iska lahaa shirkadda diyaaradda Malaysian Airlines.
Toogashada diyaaradda waxaa isku tuurtuuray dowladda Ukraine iyo kooxaha gooni u goosadka ah ee ka talo qaata dowladda Ruushka.
Gentaalkii lagu toogtay diyaaraddaas ayaa loo badinayaa inuu ahaa Saruukh kuwa dhulka geno ee cirka loo geno ah, nuuciisuna yahay (SA-11), kaasoo ka mid ah gentaalaha difaaca cirka ee Midowgii Sooviyeeti sameystay sanadkii 1979-kii.
Magaca gentaalkaan ayaa Ruushka looga yaqaanaa (BUK), halka reer Galbeedka ku jira Gaashaan-buurta NATO ay ku magacaabaan (Gadfly).
Haddii la xaqiijiyo in gentaalka lagu riday diyaaraddan noqdo nuucaas, waxaa sahlanaan doonta in sidoo kale la ogaado ciddii ageegsatay, iyadoo horay maleeshiyaadka ka horjeeda dowladda Ukraine oo gentaalka nuucaan kusoo rideen diyaarad ay laheyd Ukraine, taasoo aheyd nuuca (AN-26).
Wakaallada warar dalka Ruushka ayaa 29-kii June 2014 ee lasoo dhaafay sheegtay in maleeshiyaadka ka horjeeda dowladda Ukraine ay qabsaneen saldhig milateri, kazoo ku yaalla gobolka Donetski ee bariga dalkaas, kuna qalabeysnaa gentaalaha difaaca (BUK), gobolkaas ayaana ah gobolka lagu soo riday diyaaradda Malaysia.
Nick de Arinaj, oo ah indha-indheeye milateri ayaa qaba in gentaalaha lidka diyaaradaha ee garabka laga rido aysan awood u laheyn iney gaaraan diyaaraad rakaab oo ku duuleysa joog caadi ah, halka ay gaari karayaan diyaaradaha Helicopter ee ku duula joog hoose.
Sida uu leeyahay Nick De Arinaj oo ka tirsan Majaladda Jane’s Defence HIS oo ku takhasustay arrimaha milateri, soo riditaanka diyaarad rakaab ah oo ganacsi wuxuu u baahan yahay gentaal la mid (BUK) ama gentaalka kale ee (S-300) ee lagu sameeyo Ruushka, loona yaqaano magaca (SA-10 Grumble).
Gentaalka (BUK) ayaa dhirir ahaan gaaraya 5 mitir iyo 70 Sent miter, iyadoo culeyskiisu yahay 55 KG, halka uu gaari karo ilaa 28 KM oo dhulka ah, taasoo ka dhigan in haddii cirka loo tuuro uu si caadi ah u toogan karo diyaaradaha ganacsi ee ku duula kor-u-kac dhan 40 kun oo feet, iyadoo diyaarada Malaysia ee lasoo riday ay ku duuleysan 33 kun feet.
Diyaarad rakaab ah oo ahayed Boeing 777, duulimaadkeeduna ahaa MH17 lagana lahaa dalka Malaysia ayaa waxaa ku dhintay 295 ruux oo isugu jiray rakaab iyo shaqaale.
Diyaaradda ayaa ka duushay caasimadda dalka Holland ee Amsterdam, kuna wajahneyd caasimadda Malaysia ee Kuala Lumpur.